प्रधा’नमन्त्री ओ’लीले भने : “यो संसा’रमा कोहि पनि बो’क्सी छ भने मेरोवि’रुद्ध लगाइदिनु।” – Sadhaiko Khabar
प्रधा’नमन्त्री ओ’लीले भने : “यो संसा’रमा कोहि पनि बो’क्सी छ भने मेरोवि’रुद्ध लगाइदिनु।”
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २९, २०७७ समय: १९:०९:४३
काठमाडौं/ ‘अहिले पनि गाउँमा बो’क्सीको आरो’पमा महि’लामाथि कु’ट’पि’ट हुन्छ । तर, त्यसवि’रुद्ध आवाज उ’ठ्दैन । बो’क्सी रहेछ ठीकै भो भनेर चुप लाग्नुहुन्छ दिदी, बहिनी । यसवि’रुद्ध आवाज उठाउनुपर्यो । बो’क्सी हुँदै हुँदैन । संसा’रमै हुँदैन । संसा’रमा बो’क्सी छ भने मेरोवि’रुद्ध लगाइदि’ओस् । संसारमा बो’क्सी भएको भए मेरोवि’रुद्ध लाग्थ्यो नि ! बो’क्सी विश्व’मै हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मञ्चमा महिला दिदी, बहिनीहरु जागरुक हुन आह्वान गर्दै बो’क्सीजस्ता कुप्र’था महिलाले हटा’उन अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता कुरा कस्ले चि’र्ने ? दिदी बहिनीहरुले नै । छाउ’पडी प्रथामा महिला दिदीहरु लुसु’क्क किन गोठमा जाने ? मसँग बस्न नचा’हने तिमीहरु जा’ऊ मचाहिँ घर छा’ड्दिन भनेर वि’द्रोह बोल्नु पर्यो ।
योगमायालेचाहिँ राणा’प्रथावि’रुद्ध बोल्न सक्ने तपाईहरुले नसक्ने हुन्छ ? फेरी यसो भन्दा महि’लाविरुद्ध बोल्यो भन्ला । अब प्रत्येक महिला दिदी बहिनीहरुले यसवि’रुद्ध आवाज उठाउनुपर्यो ।’
छोराछोरीलाई समान व्यवहार न’गर्ने संस्कार अझैँ नह’टेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरालाई निजीमा छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाएर समा’नता हुँदै’न । छोरालाई अगा’डि, छोरीलाई पछा’डि पारेर समा’नता हुन्छ ? हुँदैन । छोरालाई खुवाउनुपर्यो भने माया गरेर खुवाउने, छोरीलाई झ’र्केर ‘खा’ भन्ने प्रवृत्ति छोडौँ ।’